version 1.0.3 – သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမပို့ပါနဲ့?
သြဂုတ်လ 5, 2018 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
အဆိုပါမေးလ် feature ကိုဆိုက်စေလူ့ဘာသာအပေါ်အကြောင်းကြားစာများရရန်စီမံအုပ်ချုပ်သူကို enable ပါလိမ့်မယ်, အခမဲ့ဗားရှင်း၌သငျအဖြစ်မကြာမီအသစ်တခုဘာသာပြန်ချက် posted ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရကြလိမ့်မည်. အပြည့်အဝဗားရှင်း၌သင်တို့ကိုလည်းမက်ဆေ့ခ်ျအိပ်ရေးဝြခင်းကိုခွင့်ပြုပါရန် option ရှိသည် (ဒါကြောင့်သင်ကအသုံးပြုသူပြီးနောက်တစ်ခုတည်းသတင်းစကား site ပေါ်တွင်အချို့ညှို့ထားသောရလိမ့်မယ်). သင့်အနေဖြင့် site ကိုမှဖန်ဆင်းတော်သစ်ကိုဘာသာပြန်နေ့စဉ်အကျဉ်းချုပ်မှလက်ခံရရှိရန်ထို option ကိုလည်းပြီ. သငျသညျကိုလည်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်လိပ်စာကိုရွေးချယ်ပါစေခြင်းငှါ, ရုံစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုရဲ့အီးမေးလ်အဘို့အလွတ်တစ်ခုကိုစွန့်ခွာ.
ဒီဗားရှင်းအပေါ်တိုးတက်ခဲ့ကွောငျးနောက်ထပ်အင်္ဂါရပ် backend ဘာသာပြန်ချက်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်, နေဆဲသင်အမှန်တကယ် backend အပေါ်ဘာသာပြန်ဆိုခွင့်မပြုစဉ်, ယခုသင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်သော filtering ကိုအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူဘာသာနှင့်ယခုအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောအမြောက်အများလုပ်ရပ်များစီမံနိုင်သည်. 🙂
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ, သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ, Software ကို Updates ကို
version 1.0.2 – သင့်ထံမှများမှာဘယ်မှာငါ့ကိုပြောပြပါနဲ့ငါ…
ဇူလိုင်လ 22, 2018 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု2comments
ဒီဗားရှင်းကနောက်ဆုံးအနည်းငယ်အသက်အရွယ်များအတွက်မေတ္တာရပ်ခံအင်္ဂါရပ်ခဲ့သည့် Geographic ရဲ့ IP based detection စနစ်ထောက်ပံ့ဖြည့်စွက် (အဆိုပါ Dino အုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါ).
ဘယ်လိုတဦးတည်းကဒီထောက်လှမ်းများအတွက်ထောက်ခံမှု enable ပေ? ဒါဟာ yellowtree.de အားဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ GeoIP ထောက်လှမ်း plugin ကိုအပေါ်မှီခို. ကို install နှင့် option ကို plugin ထောက်လှမ်းအခြေစိုက်ရုံ ACCEPT_LANGUAGES header ကိုအောက်က setting တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်ကြောင်းသက်ဝင်ပြီးနောက်. အဆိုပါတိုးတက် interface ကိုသင်တို့ကိုလည်းအုပ်ချုပ်ရေး panel ကိုရယူသုံးနေကြတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထောက်လှမ်းများအတွက်ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်သင်သည်အဘယ်သို့ပြပါလိမ့်မယ်.
နောက်ထပ်ရှင်းပြ, သင့်ရဲ့ site ကိုအင်္ဂလိပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နှင့်စပိန်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်ယူဆ. စပိန်ကနေအသုံးပြုသူတစ်ဦးလာရောက်လည်ပတ်သူ, ဘာသာစကားစပိန်မှ redirected ပါလိမ့်မည် (session ရဲ့ပထမဦးစွာဆက်သွယ်မှု). ဘာသာစကားကိုဘာသာစကားဆိုက်ကို default ဗားရှင်း redirect လိမ့်မယ် enabled မဟုတ်ပါကတည်းကဂျာမန်အဖြစ်ဂျာမနီကနေအသုံးပြုသူလာရောက်လည်ပတ်သူရှာဖွေတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့် အကယ်..
နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများ enabled ကြသောအခါ, အဆိုပါ ACCEPT_LANGUAGES စားပေးမှုယူပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါ feature ကိုအခမဲ့နှင့်အပြည့်အဝဗားရှင်းအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးကိုထောက်ပံ့နေသည်.
ဒီ feature ကို enable လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာမဆို misredirection သင်ရှာလိုလျှင် (ဒါဟာယာယီစမ်းသပ်ဒီမှာဖွင့်ထားသည်) ကိုအဆက်အသွယ်ပုံစံကနေတဆင့်အသိပေးပါ.
သည် PS. သင်တစ်ဦးကြိုတင်အပြည့်အဝဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနေနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အပြည့်အဝဗားရှင်း update ကိုဖေါ်ပြခြင်းမပြုလျှင် (အခမဲ့ဗားရှင်းသာကို update) ချီတုံချတုံမရ – ပထမဦးဆုံးအခမဲ့ဗားရှင်း upgrade, ထို့နောက်ချက်ချင်းအပြည့်အဝဗားရှင်းအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, အဘယ်သူမျှမ settings ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရရပါမည်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ, Software ကို Updates ကို
version 1.0.0 – အချိန်ရောက်လာပြီ
ဇွန်လ 16, 2018 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု4comments
Transposh နောက်ဆုံးအဘို့အသက်ချမ်းသာပေးခဲ့ 10 နှစ်သို့မဟုတ်ဒါ. ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင် updated plugin ကိုဆီးတားလေပြီ, နှင့်သေချာ wordpress.org ဗားရှင်းအကျင့်ကိုကျင့်စေရန်ကြိုးစားခဲ့.
အဆိုပါဗားရှင်းမပါဘဲကှာကြောင့်နှစ်ဦးကိုဗားရှင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ပို. ပို. ခက်ခဲဖြစ်လာခဲ့သည်. ထို့ကြောင့်ယင်း wordpress.org ဗားရှင်းလျစ်လျူရှုတယ်.
ဒီဗားရှင်း၏ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့်အတူစတင်ပြောင်းလဲနေပါတယ် 1.0.0 wordpress.org နှင့်အပြည့်အဝဗားရှင်းအပေါ် 1.0.0.1, အရာကဒီမှာအသစ်ကစံဖြစ်လိမ့်မည် (အပြည့်အဝဗားရှင်းအနေနဲ့အပိုဆောင်းနှင့်အတူအဆုံးသတ်မည် .1)
အဆိုပါ wordpress.org ဗားရှင်းတစ်ဦးရှိပါတယ်5ဘာသာစကားကန့်သတ်, နှင့်မည်သည့် Widgets တွေမပါဝင်ပါဘူး.
အပြည့်အဝဗားရှင်းကပို features တွေရှိပါတယ်, အဘယ်သူမျှမဘာသာစကားကန့်သတ်, Widgets တွေထောက်ခံမှု, ကျွန်ုပ်တို့၏ site ဖို့နဲ့တစ်ဦး website ရဲ့ backlink (သငျသညျဖယ်ရှားပစ်ရန်ရွေးချယ်ရသော – စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှု)
အပြည့်အဝ PHP ကိုအတူစမ်းသပ်ပြီး 7, နှောငျ့အယှနှင့်ဆက်မသုံးခြင်သတိပေးချက်များကိုဖယ်ရှားသင့်တယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ script များအဘို့အရင်းမြစ်မြေပုံထောက်ခံမှု, လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူသူတို့ကို Debugging ခွင့်ပြု
FirePHP ထံမှ Chromelogger မှ switching.
ဒီဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ခံစားကြည့်ပါ!
version 0.9.9.2 – မ git
အောက်တိုဘာလ 5, 2017 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 32 comments
ဒီဗားရှင်းကတော့ချမှတ်ခြင်းအတွက်ရှည်လျားသောခဲ့သည်, ဤနေရာတွင်လည်းဖန်စီဘာမျှ, wordpress ကိုပြင်ဆင် 4.7 ထ, ပိုပြီးဘာသာစကားများထည့်သွင်း (117!)
အခြားအ Compatibility ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်ပုံမှန်အတိုင်းပစ္စည်းပစ္စယ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်နှင့်အလားအလာ git ဖို့အဟောင်းနှင့် trusty svn ကနေပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သောကွောငျ့ဤနည်းတော့ဘူးလိုအပ်သည်ထက်ယူ. တကယ်ကဒီလွှတ်ပေးရန်အတူတက် messed သည့်. ကျွန်တော်တစ်ဦးတိုတောင်းအချိန်ဘောင်နှင့်အတူသစ်ကိုဗားရှင်းကိုလွှတ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်.
version 0.9.9.0 – ကမ္ဘာ၏အလုပျသမား – ပေါင်းစပ်!
မေ 1, 2016 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 8 comments
မေလ၏ပထမဦးဆုံးအဘို့, ကျွန်တော်များ၏အလွန်ရှည်လျားနှောင်းနှင့်မျှော်လင့်ဗားရှင်းနောက်ဆုံးပြန်လွတ်လာပါပြီနိုင်ငံတကာလုပ်သားများနေ့က 0.9.9.0.
ပဌမ – ထောက်ခံ ဘိုင်ဒူ, လည်းတစ်ဘာသာပြန်ချက်အင်ဂျင်ရှိသည်သောတရုတ်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီး, ဒီအင်ဂျင်အတွက်မဟုတ်ဘဲထူးခြားတဲ့သောတုံများအတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်. နောက်ထပ်ကောင်းသောအရာကတော့ဒီအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်, တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာတည်ခင်းဧည်ဖြစ်ကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအလုပ်ဘာသာပြန်ချက်အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုခွင့်ရနိုင်.
ဒုတိယ – ကျွန်တော်တို့ Google နှင့် Yandex နှစ်ဦးစလုံး၏လက်ရှိ key ကိုလျော့နည်းထောက်ခံမှု fixed ပြီ, ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်အခုသူတို့နောက်တဖန်အလုပ်လုပ်သင့်တယ်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ site ကိုအနည်းငယ်စာမျက်နှာများဘာသာပြန်ထားသောမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျဗားရှင်းအသစ်ဖုံးလွှမ်းတယ်. အနည်းငယ်ဘာသာစကားဖြစ်စဉ်ထဲမှာကဆက်ပြောသည်ခဲ့သည်.
တတိယ – အပြောင်းအလဲတွေအများကြီး, ပတ်လည်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဘာဂ်. yeah, ငါတို့သည်အချို့သောများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ fix ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
အဘယ်ကြောင့်သင်ဆဲဒီဖတ်? ရုံယနေ့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်, နှင့်မနက်ဖြန်အလုပ်လုပ်ကိုင်!